Madaxda idaacada Daljir oo dhalleeceeyey fal xad gudub ah oo lagula kacay weriye Axmed Somali. – Radio Daljir
Febraayo 25, 2010 12:00 b 0
Bossaso, Feb 25 – Maamulka guud ee idaacada Daljir iyo agaasimka laanta Boosaaso ayaa maanta si wadajir ah shir jaraa’id oo ay ku qabteen magaalada Bossaso waxaa ay ku canbaareeyeen fal uu shalay kula kacay xeer-ilaaliyaha maxkamadda, derejada 1-aad ee gobolka Bari weriye Axmed Nuur Ibraahim ‘Axmed Somali’ oo ka tirsan shaqaalaha idaacada Daljir.
Axmed Taaraan, xeer-ilaaliyaha maxkamada, derejada 1-aad ee gobolka Bari ayaa isaga iyo askar ilaalo u ahi ay si wada jir ah ugu gacan qaadeen weriye Axmed Somali oo shaqo u joogey maxkamadda oo ay markaa ka socotey dacwada eedaysne ku sugnaa maxkamadda.
Agaasimaha guud ee idaacada Daljir Axmed Sh. Maxamed ‘Tallman’ iyo Agaasimaha idaacada Daljir, Bossaso Maxamed Maxamuud ‘Welcome’ ayaa shirka jaraaid si wada jir ah ugu canbaareeyey falkan foolxumada ah ee uu ku kacay xeer-ilaaliye Axmed Taaraan.
Ugu horayn, waxaa shirka furay Agaasimaha idaacada Daljir, Bossaso Maxamed Welcome oo isagoo si kulul u canbaareeyey falkaasi uu ku kacay xeer-ilaaliyuhu; Agaasime Maxamed Welcome ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in qof mas’uul ku magacaabani u gacan qaado weriye ku guda jira hawl maalmeedkiisa.
Sidoo kale, Agaasimaha guud ee idaacada Daljir Axmed Sh. Maxamed ‘Tallman’ ayaa wax laga naxo ku tilmaamay in shaqsi wata mas’uuliyada xeer-ilaalinta uu ku xad gudbo xaquuqda weriye u shaqaynaya bulshada.
“Geel duqdiisii durdurisey, Aarankiisa maxaad moodaa” ayaa uu yiri Axmed Sh. Tallman.
“Hadii xeer-ilaaliyihii ay ahayd in uu sharciga dhawro, oo uu xeerka ilaaliyo, oo xaquuqda dadka iyo sharafta loo igmaday uu ilaaliyo uu isagu ku xad gudbey xaquuqdii daka, weliba weriye u shaqaynaya bulshadiisa oo sharaf ku dhex leh, mas’uuliyiinta kale maxaa laga filikaraa?” ayaa uu ku daray yiri Axmed Sh. Tallman.
Madaxda dawlada Puntland ayaa loogu baaqay in ay dhawraan xuquuqda muwaadinka, haybadda mahnadda saxaafadda, shuruucda u deggan dalka, ee kala hagta bulshada rayadka ah iyo mas’uuliyiinta xilalka u haya dawlada.
Ma aha markii ugu horeysey ee maamulka Puntland tacadi isugu jira jirdil, xarig, handedaad, iyo caga-jugleyn u gaysto weriye ka mid ah warbaahinta madaxa baanaan ee ka hawlgasha gobollada Puntland, gaar ahaana idaacada Daljir oo hore loo xirxiray weriyayaal u shaqaynayey.
Si kastaba ha ahaatee, maamulka idaacada Daljir ayaa sheegay in aysan halkaa ku dhaafayn hawshan, balse waxaa ay tilmaameen in ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta wax muuqda uu ka qabanayo maamulka Puntland dhacdadan foosha xun.
Kulamadii Xildhibaanada federalka iyo madaxda Puntland uga socday Garowe oo soo gaba-gaboobay.